Daawo'' Wiil Canadian ah oo jar jaray Arday Shiinees ah ka dibna Hilibkiisa u diray Xisbi siyaasadeed ka dhisan Canada(Daawo Muuqaal+Warbixin) - iftineducation.com
iftineducation.com – Fal naxariisdaro ah kii ebid Aduunka ugu xumaa ayaa waxa uu ka dhacay Montreal oo ku taal dalka Canada ka dib markii nin lagu magacaabo Luka Rocco Magnotta oo 29 jir ah uu cad cad u jaray Wiil ay Saaxiibo ahaayeen oo u dhashay dalka China ka dibna Hilibkiisa waxa uu Poostada alaabaha lagu Xawilo ugu diray Xisbi-siyaasadeed ka dhisan dalka Canada.
Ninka falkaan wuxuushnimada ah geeystay ayaa dilka ka dib wuxuu u fakaday magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska balse markii la soo ogaaday inuu ku sugan yahay Faransiiska ayuu ku soo cararay caasimada dalka Germany ee Berlin.
Luka Rocco Magnotta oo ay raadinayeen in ka badan 2000 oo Interpol ah (Booliiska Aduunka) ayaa iminka waxaa si la yaab ah u soo qabtay Ciidamada Booliiska dalka Germany ka dib markii uu Telfoon u soo diray nin lagu magacaabo Kadir Anlayisli oo u dhashay dalka Turkiga.
Kadir Anlayisli oo 42 jir ah kana shaqeenayay Dukaan Internetka laga isticmaalo ayaa waxa uu Saxaafada u sheegay inuu aqooday Wajiga ninka Dilaaga ah oo uu ku arkay dhoor jeer Jaraaidyada iyo Telefishinada Caalamka.
Luka Rocco Magnotta oo la sheegay inuu dalka Canada ka ahaa Actor caan ah oo dhigi jiray Filimaanta Anshax xumada waxa uu 25-kii bishii May dilay Wiil ay saaxiib ahaayeen kaas oo lagu magacaabi jiray Jun Lin. Ninkaan dilaaga ah markii uu dilay wiilka Shiineeska ah wuxuu dhigay qiso aan Caalamka horay uga dhicin kaas oo inta jar jaray Wiilkii uu dilay Hilibkiisa ka dibna u diray Xisbi-siyaasadeed ka dhisan dalka Canada.
Luka Rocco Magnotta ayaa markii uu dilayay ninka Shiineeska ah waxa uu iska duubay Video kaas oo soo galiyay aalada Internetka balse Ninkaan dilaaga ah ayaa iminka lagu qabtay Karl Marx Strasse oo ku taal magaalada Berlin ee caasimada dalka Germany waxaana loo sii gudbinayaa ciidamada Booliiska dalka Canada.